ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: သမိုင်းတကွက် အမည်းစက်စွန်းခဲ့ပြီ
မြန်မာ့သမိုင်းကို လွတ်လပ်ရေး ရပြီး သည်ဖက်ခေတ်တလျှောက်လုံး ခြုံငုံသုံးသပ်ရင် ... စစ်အစိုးရနဲ့ ကင်းလွတ်ခဲ့တဲ့ နှစ်ကနည်းနည်းမို့ စစ်အာဏာရှင်များ ကြီးစိုးသည့်ကာလလို့ ခေါ်ရင် မမှားပါဘူး။ ခုထိအောင်လည်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း သိန်းစိန်က အရပ်သားအစိုးရပါလို့ ပါးစပ်က ဘယ်လောက် အော် အော် ပြည်သူလူထုကတော့ အရပ်သားအယောင်ဆောင် ယူနီဖောင်းချွတ် စစ်အစိုးရလို့ပဲ နားလည်ထားပါတယ်။ စစ်အစိုးရဟာ နာမည်တွေ ဘယ်လိုပဲပြောင်းပြောင်း တံဆိပ်တွေ ဘယ်လိုပဲပြောင်းကပ်ကပ် ပြည်သူလူထုရဲ့ ချစ်ခင်ယုံကြည်ကိုးစားမှုကို ဘယ်တုန်းကမှ မရခဲ့ပါဘူး။ ဒါ ဘာကြောင့်လဲ။
“မိတ္ထီလာအရေးအခင်းဟာ တမင် သွေးရိုးသားရိုးအတိုင်း ဖြစ်လာတဲ့ အရေးအခင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာ အရပ်သားရော အဖွဲ့အစည်းပိုင်းကပါ ပြောနေကြပြီ။ ဒါဖြင့် ဘယ်သူလဲ၊ အရေခြုံစစ်အစိုးရ မလှုပ်ရဲပြီ၊ ပုပ်သင်ဥ ပေါ်မှာ ကြောက်တော့ ညောင်မြစ်ကို မတူးရဲ။ တောင်ကုတ်မှာ မူဆလင် ၁၀ ယောက် အသတ်ခံရတဲ့ကိစ္စ၊ စစ်တွေမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ လူပေါင်းများစွာ သေကြေဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ အဓိကရုဏ်း နှစ်ပေါက်တဲ့အထိ အစီရင်ခံစာ ထွက်မလာ၊ ဖင်ကြားခဲညှပ်နေပြီ။”
ဒီနေရာမှာ ကြားဖြတ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရေးသမားဆိုသူအချို့အကြောင်း နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရေးသမား အတော်များများကို "ဝယ်" လို့ရပါတယ်။ အကုန်လုံးကို မဆိုလိုပါ။ တချို့က ဝီစကီတလုံးနဲ့ ဝယ်လို့ရပါတယ်။ တချို့က မိုဘိုင်းတလုံးနဲ့ ...၊ တချို့က တိုက်ခန်းလေး၊ မြေကွက်လေး ...၊ တချို့ကျ ဈေးကြီးကြီးပေးပြီး ရာထူးလေး၊ နေရာလေးနဲ့ ဝယ်ရင်ရသပေါ့လေ။ ဘာနဲ့မှ ပေးဝယ်လို့မရတဲ့ ရဲရဲတောက် နိုင်ငံရေးသမားတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အရေအတွက်အားဖြင့် နည်းသပေါ့လေ။ (ဥပမာ) ဦးဝင်းတင်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုး။
ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ စံကွန့်တို့လူမျိုးကို အရိုင်းအစိုင်းတွေ သတ်ရဲ ဖြတ်ရဲ လုယက်ရဲ တဲ့ လူတွေလို့ ကမ္ဘာကမြင်မှာ စံကွန့် သေမလောက်ကြောက်ပါတယ်၊ အာဏာလက်ဆုပ်မပြေချင်တဲ့ အာဏာ အဝိဇ္ဖာဖုံးနေတဲ့ လူတစုရဲ့ အစီအမံအကြံဥာဏ်ကြောင့် အပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေသေရ၊ လူမျိုးနာမည်ပျက်ရနဲ့ သြော် ... သမိုင်းတကွက် အမည်းစက်စွန်းခဲ့ပြီကော။
ဆရာစံကွန့်အဲဒိလောက်ဝေဖန်ပိုင်းခြား တက်နေတာ တစ်စိတ်လောက်တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးနိုင်ရင် အများရှေ့ ထွက်လုပ်ပြစေလိုပါသည်။ဒါမူိးတွေ ရေးလို့ ဘာအကိူးမှ မရှိနိုင်ပါ ။သင့်မိသားစုထဲမှာတောင် သင်ဘယ်လို အရည်အချင်းမိူးနဲ့ ဘယ်လောက်တာဝန်ယူမှုရှိသလည်းဆိုတာ အရင်ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်ပါစေ၊
ကိုစံကွန့်ရေ အမျိုးကိုချစ်တယ်ဆိုရင် ကျီးကန်းသားလေးရှာစားလိုက်ဦးဗျ သူငယ်နာစင် တယ်တဲ့
Dear San Kunt, you said Burma is notacountry of anarchists. I disagree with you. Because of anarchism prevails in Burma there are never ending conflicts with blood-shedding events. In fact, Burma has no genuine government to date since 1962. Previously,the country was ruled by military dictators who has taken advantage on unarmed people and now the last dictator do not directly ruled the country. This guy is cunning and clever comparing to other dictators. His subordinates have written Constitution without participation of ethnic people and opposition party that won the elections in 1990. Instead of handing over power to the winning party as promise, he has formedacivilian government (in order to play trick to the world communities) in which almost all the members are the same old generals. Of course changes have been made. They change their clothes. Now the members of the government can be seen in Taikpon and Gaungpaung including Taunshay pasoe. President Thein Sein is nothing butahead of puppet government. The military regime is pulling the strings behind.
If, some one,say or write,the truth,the Regime ball lifters are angry,cause,they do not want the truth.But, I have really appreciate this article of "San Kunt", and agree to comment of Mg Mg Kyaw Win,yes, our power crazy notorious,Senior General Than Shwe,and his followers are still pulling the curtain behind. U Than Sein, is totallyadeaf and dump puppet only
စံကွန့် ရေ မင်းအမှန်တွေပြောတော့ သူတို့တွေကနာတယ်
အမှန်တရားအတွက် ဘယ်သူ့ကိုမှ အားနာဘို့မလိုပါ။
Leo Aks said...
however army goverment is bad,we do not want muslim in our country,,,,
နာရီပိုင်းအတွင်း အဖြစ်အပျက်ကို အဲဒီမြို့မှာ တာဝန်ယူနေတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
ကတာဝန်ရှိတဲ့ ခရိုင်/မြို့နယ် ထွေအုပ် ။ခရိုင်/မြို့နယ် ရဲ ။မီးသတ် ။စည်ပင်။
တို့က သာမန်ချိန်နဲ့ အရေးပေါ်အချိန် အတွက်ကြိုတင်မျှော်တွေး စီမံထား
သင့်တယ်။ ခရိုင်အဆင့် မြိုနယ်အဆင့်တွေ မှာ တာဝန်မသိ တာဝန်မကျေ
တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကြောင့် ကြီးကျယ်တဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်နေတာ။
တက်ကြွတဲ့ လူတွေနဲ့ လဲလှယ်သင့်နေပြီ။
စံကွန် ကို မေးမယ်။မိတ္ထီလာ အရေးအခင်းမှာ ပထမဆုံး အသတ်ခံရ တာဘယ်သူလဲ။ အကျပ်အတည်း တစ်ခုခုကြုံရတုန်း ဘုရားတနေရတဲ့ မင်းပြောတဲ့ လူနည်းစုလား။ အစပိုင်းကိစ္စကို ယုတ္တိရှိအောင်ရှင်းပြပါ။ရောမချပါနဲ့။
နိုင်ငံရေးသမားတွေကို ဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်။စစ်အစိုးရက အကြီးအကျယ်လိုက်ဝယ်တာ မှတ်မိမှာပေါ့ နေ့တိုင်း သတင်းစာမှာ NLD ပါတီဝင်တွေ ခေါင်းဆောင်တွေ အပြိုင်အဆိုင်နှုတ်ထွက်ကြတဲ့ခေတ်ကို။ဝယ်လို့မရတဲ့ လူတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲဒီ အချိန်တုန်းက ပြည်ပသတင်း media တွေက ခံယူချက်အပြည့်နဲ့တော်လှန်ရေးတွေဆင်နွှဲနေတယ်လို့ယုံ ကြည်ခဲ့ပေမယ့် ခုအခြေအနေကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ ဒီmedia တွေက လိုချင်တဲ့သတင်းပုံစံမျိုးတွေမှသာတင်ဆက်၊တချို့သတင်းတွေကို မထင်မရှားဖုံးပြီးမသိသလိုလို လုပ်သွားတာတွေ နဲ့ လက်စသတ်တော့တစ်ကိုယ်ရည်ချမ်းသာမှုအတွက် တော်လှန်ရေးဗန်းပြပြီး လုပ်စားဆဲဆိုတာကို လက်ရှိတွေ့နေရတယ်။ပြည်သူတွေအတွက်မလွယ်ပါဘူး။စစ်အစိုးရရဲ့ဖိနှပ်မှုကတစ်ဖက်၊ဒီမိုလုပ်စားတော်လှန်ရေးmedia တွေရဲ့ ဘယ်သူသေသေငတေမာမယ့် တိုင်းပြည်လက်ညှိုးထိုးပြီးငွေရှာ sponser မျက်နှာကြည့်ပြီးသူတို့ နဲ့ဆန့်ကျင်ပေမယ့်မှန်ရဲ့သားနဲ့မတင်ပြရဲတဲ့ ဒီလိုလူစားတွေနဲ့ ဒီတစ်သက် ဒီစစ်အာဏာရှင်နဲ့ ဒီမိုလုပ်စား media တွေပဲ ဆက်ပြီးငွေရှာကောင်းဦးမှာပဲ။
US နှင့် နအဖ နားလည်မှု ရပီး မှ NLD ကို မှီရာ ကား နှင့် လိုက် ခဲ့ ခိုင်းရခြင်း ကြောင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က "ဦးသိန်းစိန်ကို ယုံပါတယ်" ဖြစ်လာတာဟု တွေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။